Nohatespeech Photos on Instagram
Domani su RAI3sarò ospite di Lucia Annunziata nel programma Mezz'ora in più. Vi aspetto. #365giornirispetto #nohatespeech #iocombatto
Greetings!!! #Buoyians🌏 #nohatespeech #africa #sweden #BuoyantOnlineTv #instagramer #facebook #igbowedding #funnymemes #funtimes #foodporn #food #AbujaTwitterCommunity #abujaevents #women Cc @mrbuoyant 📱+2348063720029
Kenangan hari ini 14 Desember 2019 El pamit yaa , bukan EL DIABLO lhooo Dieja EL - U - D - Ye alias LUDY yaa Datang terakhir , pulang paling duluan , maafkan , ada kerjaan lain , dan rumah paling jauh 🤔🤔 Yekan @p.kawistari Silau dan mantul tak masalah , penting ada kenangan, dan walau sebentar , ada bahasan penting dong #memory #14desember2019 #smartpeople #bersihbersihbumn #sayadukungericktohir #garudadukungericktohir #beranikarenabenar #cleaner #bismillah #allahwithme #allahwithus #alhamdulillah #pertemanansehat #nohatespeech #dotherightthing
Wir feiern es, wenn der #Rechtsstaat funktioniert.🎉🍾 Wie in diesem Fall. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte im Februar eine Haterin, die auf #Facebook mehrere Postings gegen Geflüchtete geteilt hatte. #Adventskalender #HaterZurKasse #VerfolgenStattNurLoeschen 🚓 #NoHateSpeech #NoH8
#stophatespeechbill #nohatespeech #FreeSoworeNow #RevolutionNow
222 44 16 hours ago
Ora alla #casadelledonneterni con Carlotta SamieMartina Chichi #hatespeech #nohatespeech #discorsidodio #nodiscorsidodio #bastaodio #odiareticosta #odiareticostaofficial #dirittiumani #humanrights #unhcr #unhcritalia #dichiarazioneuniversaledeidirittiumani #amnestyinternational
Tra poco in Piazza MazziniaBolzano con le #sardine! @6000sardine @bolzanobozen @sardine_bolzano #bolzanononsilega #sardine #6000sardine #sardina #illustrazione #manifestazione #bolzanocity #multicultural #nohate #noallodio #nohatespeech #nohatespeechmovement #love #amore #italia #italy
Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft sollen nicht in den Himmel kommen? Diese Vorstellung einiger gläubigen Menschen gefällt unseren Workshop-Teilnehmenden gar nicht. . #DemocraticMemeFactory #DemocraticMemes #MemeDerWoche #MemeOfTheWeek #memestagram #MemesGegenHass #NoHate #StopHateSpeech #NoHateSpeech #NoHateSpeechMovement #NoHateJustLove #LoveSpeech #CounterSpeech #SayNoToHateSpeech #internett #RespektImNetz #NetzOhneHass #BesserAlsHass
ချစ်ရ..တန်ဖိုးထားရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့မီဒီယာတို့ရေ ဒီနေ့က စလို့ ၁။ သူများရေးတဲ့အမုန်းစကားပို့စ်တွေ ဗွီဒီယိုတွေ အသံဖိုင်တွေ မတ်စေ့တွေ မတင်ကြ မရှယ်ကြ မမန့်ကြပါနဲ့တော့ ... ၂။မိမိကိုယ်တိုင်လဲ အမုန်းစကားတွေထဲက ရုန်းထွက်လိုက်ကြပါတော့ .. ၃။ယဥ်ကျေးတဲ့ သူတပါးကိုမထိခိုက်တဲ့ စကားတွေ စာတွေ ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေအသုံးပြုပေးကြပါလား (သူတပါးနေရာမှာ မိမိဆိုရင် ခံနိုင်ရည်ရှိမလား?) .... ၄။စိတ်ခံစားမှုအလျောက် ပို့စ်တင်ပီးရင် တချိန်မှာနောင်တရရမဲ့ ကိစ္စတွေ(အထူး)ဆင်ခြင်ကြပါနော် ... ၅။အမုန်းစကား အလေ့အထ စွဲလန်းနေသူတွေကို လမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင် ယဥ်ကျေးစွာကူညီ အကြံပေးကြပါ.. ... ၆.တခုခုဆိုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့စကားလုံးတွေ ဆဲဆိုရိုင်းစိုင်းတာတွေကို ကိုယ်စီရေးကြ မန့်ကြတာတွေ cyber bully ဝိုင်းလုပ်ကြ မန့်ကြ ရေးကြ shareကြ မတ်စေ့ပို့ကြတာတွေ ကျွန်မတို့ဆင်ခြင် ကြရအောင် ၇။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဒီလိုအကောင့်တွေ ရုပ်သံတွေ ပေ့ချ်တွေကို ရှောင်ကြပါ 👉အမုန်းစကား သက်သက်လိုက်ဖြန့်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးခြေထိုးသူများ. 👉လူထုဆဲဆိုရိုင်းစိုင်းအောင်အညှောင့်ထောင် ပို့စ်တင်သူများ.... 👉ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဆဲဆိုပြမှ လူပြိန်းပရိသာတ်၀န်းရံကြတာမို့ ဆဲဆိုရိုင်းစိုင်းသောပို့စ်များတင်နေကြသော ဖေ့စဘွတ်ဆယ်လီများ.. 👉လူပြိန်းကြိုက် အတင်းအဖျင်းပို့စ်များ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းသောပို့စ်များ ကလေးငယ်များမကြည့်သင့်သောပို့စ်များ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားစေသော လိင်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုများတင်နေသော သူရဲတစ္စေအကြောင်းများတင်နေသောပေ့ချ်များ၊ပေ့ချ်အတုများ၊အွန်လိုင်းရုပ်သံများ အကောင့်များ .. အထက်ပါတို့အား မကြည့်ရှူခြင်း (ကျော်ပစ်ခြင်း) မ Shareခြင်း ဘလော့ခြင်း unfriend လုပ်ခြင်းများဖြင့် မိမိအကောင့်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရှိပါကြရန်.. .. လိုတာတွေလဲ ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါ မိတ်ဆွေများ- .. No Hate Speech Movement =============== 1. Don’t spread hateful posts 2. Challenge the message, not the person 3. Don’t say anything you might regret 4. Be polite and not abusive 5. Connect with others how to avoid hate speech #NoHateSpeech #NoHateSpeechMovement #Myanmar
👉 BE YOUR BEST SELF! Ecco i nostri ragazzi di #HITteam #Roma in #azione durante l'evento di sensibilizzazioneediffusione della #lotta ai discorsi di incitamento all' #odio, organizzato grazie ad #hitproject presso Il Cantiere. Noi siamo ancora fomentati 😂💪 ➡️ SAY YES TO FREESPEECH #younginaction #Hitjourney #creativecontents #positivethoughts #arts #music #photografy #illustration #poetry #rap #partecipation #nohatespeech #freespeech @folias_cooperativa_sociale